Inkampani yase Intel eyayisandul ' ukuveliswa esidlangalaleni ikhulule ngokukhululekileyo i-1103, inkumbulo yokuqala yokufumana i-DRAM-dynamic-chip ngo-1970. Yayiyona nto yokugcina imemori ye-semiconductor kwihlabathi ngowe-1972, ukulwa nokukhumbula imemori engundoqo yomthombo. Ikhompyutheni yokuqala yokuthengisa esebenzisa i-1103 yayiyi-HP 9800 uchungechunge.
U-Jay Forrester waqulunqa imemori engundoqo ngo-1949, kwaye yaba yinto ebalulekileyo kwimemori yekhompyutha kwiminyaka ye-1950.
Yahlala isetyenziswa kude kube sekupheleni kwee-1970. Ngokweentetho zoluntu ezinikezwa nguFilipu Machanick kwiYunivesithi yaseWitwatersrand:
"I-magnetic material iyakwazi ukuguqulwa kwamagnetization kwintsimi yombane." Ukuba intsimi ayinamandla ngokwaneleyo, i-magnetism ayitshintshi. ukuya kwisigridi, ngokudlulela isiqingatha sezinto ezifunekayo ukuze uguqule ngeengcingo ezimbini ezidibanisa kuphela kuloo nto. "
UDkt. Robert H. Dennard, uMntu kwi- IBM Thomas J. Watson Research Centre , wenza i-DRAM enye-transistor ngo-1966. UDennard kunye neqela lakhe babesebenza kwiintshukumo zokuqala zentsimi kunye neesekethe ezidibeneyo. Imemori yeememori yaqwalasela xa ebona uphando olunye lweqela kunye nenkumbulo egciniweyo yememori. UDennard uthi uya ekhaya waza wafumana iingcamango ezisisiseko zokudala i-DRAM ngaphakathi kweeyure ezimbalwa.
Wayesebenza kwiingcamango zakhe kwi-memori ye memori elula eyayisetyenziselwa kuphela enye i-transistor kunye ne-capacitor encinci. IBM kunye noDennard banikezelwa ilungelo lobunikazi be-DRAM ngo-1968.
Imemori yokufikelela kwiRandom
I-RAM imele imemori yokufikelela engaqhelekanga - imemori engafumaneka okanye ibhaliwe ngokungaqhelekanga ngoko nayiphi na i-byte okanye inxalenye yememori ingasetyenziswa ngaphandle kokufikelela kwezinye ii-bytes okanye inkumbulo.
Kwakukho iintlobo ezimbini ezibalulekileyo ze-RAM ngelo xesha: I-RAM enamandla (DRAM) kunye ne-RAM egxina (SRAM). I-DRAM kufuneka ihlaziye amawaka ngamaxesha ngesibini. I-SRAM ikhawuleza kuba ayifuni ukuhlaziywa.
Zombini iindidi ze-RAM zincinci - zilahlekelwa ziqulatho xa amandla avaliwe. I-Fairchild Corporation yenze i-chip yase-SRAM yokuqala ye-256-k ngo-1970. Kungekudala, iindidi ezintsha ze-RAM chips zenziwe.
UJohn Reed kunye neqela le-Intel 1103
UJohn Reed, ngoku eyiNtloko yeReded Company, wayebe yinxalenye yeqela le-Intel 1103. IRed inikezela le nkumbulo elandelayo malunga nophuhliso lwe-Intel 1103:
"Ukuveliswa?" Ngaloo mihla, i-Intel - okanye abanye bambalwa, ngenxa yolu hlobo - babejolise ekufumaneni amalungelo okanye ukufezekisa izinto. Babenomdla wokufumana iimveliso ezintsha ukuthengisa kunye nokuqala ukuvuna inzuzo. Ngoko ke ndikuxelele indlela i1103 yazalwa ngayo kwaye yaphakanyiswa.
Ekubeni ngo-1969, uWilliam Regitz wase-Honeywell uhambele iinkampani ze-semiconductor zase-US zikhangela umntu ukuba ahlanganyele ekuphuhliseni inkumbulo yesiganeko eshukumisayo esekelwe kwintsibano yesithathu yenguqu ye-transistor apho yena-okanye omnye wabasebenzi abasebenza naye Le seli liyi-'XX, 2Y 'yohlobo olubekwe ngoqhagamshelwano' oluthileyo 'lokuxhuma ukuhamba kwidluliselo kwiphakamiso kwisango lentshintsho yangoku yeseli.
URigitz uthetha kwiinkampani ezininzi, kodwa i-Intel yavuya kakhulu ngamathuba apha kwaye yagqiba ekubeni iqhubeke nenkqubo yophuhliso. Ngaphezu koko, ngoxa iRegitz yayiphakamise i-chip ye-512-bit, i-Intel yanquma ukuba i-2.024 bits iya kufezeka. Kwaye ke le nkqubo yaqala. UJoel Karp we-Intel wayengumveleli wesiphaluka kwaye wasebenza ngokusondeleyo kunye noRegitz kuyo yonke inkqubo. Kwagqitywa kwiiyunithi zokusebenza zokusebenza, kwaye kwanikwa iphepha kule fowuni, i1102, kwinkomfa ye-ISSCC ye-1970 e-Philadelphia.
Intel wafunda izifundo ezininzi kwi-i1102, oku:
1. Iiseli ze-DRAM zifuna i-substrate bias. Oku kwavelisa iphakheji ye-DIP ye-18.
2. Ukuqhagamshelana 'ukuhlawula' kwakuyinkinga enzima kwezobuchwepheshe ukuxazulula nokuvelisa.
3. I-'VG 'isalathisi se-cell strobe signal esenziwe imfuneko yecandelo le-1X, 2Y' yesekethe lenza ukuba izixhobo zibe neelona ezincinci zokusebenza.
Nangona baqhubeka nokuphuhlisa i1102, kwakukho imfuneko yokujonga ezinye iindlela zeeseli. U-Ted Hoff wayekhe wathetha zonke iindlela zokubambisa iingcingo ezintathu kwi-cell phone yeDramam, kwaye omnye umntu wajonga ngokukhawuleza kwiseli '2X, 2Y' ngeli xesha. Ndicinga ukuba mhlawumbi bekuyiKarp kunye / okanye uLeslie Vadasz - andingazange ndifike kwi-Intel. Ingcamango yokusebenzisa 'umnxibelelwano wangcwatyelwayo' isetyenziswe, mhlawumbi kwinkqubo enkulu Tom Rowe, kwaye le nqoli yaba yinto ekhangayo ngakumbi. Iyakwazi ukuphelisa umba wokudibanisa kunye kunye nomlinganiselo wesalathisi okhankanywe ngasentla kwaye uvelise iselula encinci ukuqala!
Ngoko uVadasz noKarp baqulunqa isicwangciso se-i1102 e-sly, kuba le yayingeyona isigqibo esithandwayo kunye no-Honeywell. Banika umsebenzi wokuyila i-chip kuBob Abbott ngexesha elide ngaphambi kokuba ndifike kwindawo yesehlakalo ngoJuni 1970. Waqalisa ukuyila kwaye wayibeka. Ndithatha iprojekthi emva kokuba imasks yokuqala '200X' idutshulwe kwiindawo zokuqala ze-mylar. Kwakungumsebenzi wam ukuguqula umkhiqizo ovela apho, okwakungekho msebenzi omncinci ngokwawo.
Kunzima ukwenza ibali elide elifutshane, kodwa i-chips yokuqala ye-silicon ye-i1103 yayingenakusebenza kuze kube yinto efumanisa ukuba ukungahlali phakathi kwexesha elithi 'PRECH' 'nexesha' LOKUQALA '' ikhefu 'elidumile kubaluleke kakhulu ngenxa yokungabikho kokuqonda kweengcingo zengaphakathi zangaphakathi. Oku kufumanisa kwenziwa ngumqhubi wovavanyo uGeorge Staudacher. Nangona, ukuqonda oku buthathaka, ndazibonakalisa izixhobo ngakwesandla saza sakha iphepha lolwazi.
Ngenxa yezivuno eziphantsi esizibonayo ngenxa yeengxaki ze-'Tov ', uVadasz kunye nam ndincoma kulawulo lwe-Intel ukuba le mveliso ayilungele ukuthengisa. Kodwa uBob Graham, ngoko Intel Marketing VP, wacinga ngenye indlela. Wachukumisa ngenxa yesingeniso sangaphambili-phezu kwezidumbu zethu, oko kuthetha.
I-Intel i1103 yeza kuthengiswa ngo-Oktobha ka-1970. Ukufuna kwakomeleleyo emva kokuqaliswa kwemveliso, kwaye kwakuwumsebenzi wam ukuguqula ukuveliswa okungcono. Ndenza oku kumanyathelo, ndenza uphuculo kuwo wonke umthombo wesitokisi esitsha kuze kube yilapho i-'E 'yokuhlaziywa kweemaski, apho i1103 yayikuvumela kwaye iphumelele kakuhle. Lo msebenzi wangaphambili wamisela izinto ezimbalwa:
1. Ngokusekelwe kohlalutyo lwam amane osebenzayo, ixesha lokuhlaziya libekwe kwii-millisecond ezimbini. Ukuphindaphinda kwebhanari kweso sibonakaliso sokuqala kusekho mgangatho nanamhla.
2. Mhlawumbi ndiyilungiselelo lokuqala ukusebenzisa ii-transistors zeSango njenge-bootstrap capacitors. Iisethi zamaski eziguquguqukayo zazininzi zezi zinto ukuphucula ukusebenza kunye nemida.
Kwaye oko kukuthetha konke nge-Intel 1103. Ndiza kuthetha ukuba 'ukufumana izinto' kwakungeyona nto ixabisekileyo phakathi kwethu nabacwangcisi beesekethe bale mihla. Ndiza kuthiwa ngamagama angama-patents anxulumene nememori engama-14, kodwa ngaloo mihla, ndiqinisekile ukuba ndaqulunqa amanyathelo amaninzi kwixesha lokufumana isiphaluka esilungeleyo kwaye sithengise ngaphandle kokuyeka ukwenza nayiphi na inkcazelo. Inyaniso yokuba i-Intel ngokwayo ayinakhathazeka ngamalungelo obungelo lobuniki kuze kube 'ngokukhawuleza' ibonakaliswe kum meko ngamalungelo awodwa okanye awamagunya amhlanu endiwunikezelweyo, ndafaka isicelo kwaye ndabelwa iminyaka emibili emva kokuba ndishiye kwinkampani ekupheleni kuka-1971! Khangela enye yazo, kwaye uza kundibona eboniswe njengomqeshwa we-Intel! "
Imbali ye-Can-And The Can Opener
Imbali yoMculo: Iintlobo ezahlukeneyo zoMculo ngaphezu kwekhulu leminyaka
Imibuzo 'Engabonakaliyo Yomntu' yeSifundo kunye Nengxoxo
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yeBismarck Sea
Iingcebiso zokusingatha abafundi abanzima
Izinambuzane ezincinci zehlabathi
Idioms kunye neentetho - Beka
Ukudlala kweSophocles: 'Oedipus King' kwi-60 Seconds
Umndeni ka-Amelia Earhart